Kenya oo sheegtay Shabaab inay ka baxayaan Kaymaha Boni | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Kenya oo sheegtay Shabaab inay ka baxayaan Kaymaha Boni
Kenya oo sheegtay Shabaab inay ka baxayaan Kaymaha Boni
Dowladda Kenya ayaa sheegtay kadib hawlgallo xiriir ah oo ciidamadeeda ay ka sameeyeen Kaynta Booni iyo Deegaanka Lamu in ay horseeday in Al-Shabaab ay ka baxaan deegaannada xeebta ah.
Agaasimaha hawlgalka xoreynta Boni ee Kenya Joseph Kanyiri, ayaa sheegay in 5 ka mid ah Al-Shabaab ay dileen islamarkaana ka furteen 6 Qori oo AK-47 ah 321 xabo oo rasaas ah, Saddex garneyl iyo waxyaabaha qarxa.
Hawlgalka Ciidamada Kenya ayaa jirsaday lix sano Bishan ayuuna gaarayaa sanadkii lixaad,Al-Shabaab waxa ay wali ka dagaallamayaan gudaha Kenya waliba si ka xoog badan sidii hawlgalka Al-shabab ee gudaha Kenya uu ahaa ka hor 2011-kii.
Joseph Kanyiri, waxa uu sheegay in Ciidamada KDF ay sameyaan hawlgal joogto ah joogitaankooda deegaankaasna uu aad u badan yahay islamarkaana ay helaan xogta Ragga ka tirsan Al-shabaab.
Waxaa uu sheegay in dadka deggan Gobolka Xeebta ah iyo xoolo dhaqatada ay ka helaan xogta ugu badan ee la xiriirta Goobaha ay Al-shabaab ku sugan yihiin, waxaana uu intaas ku daray in Bishan October iyo Bishii ka horreysay ay ka gaareen guulo la taaban karo.
“Al-Shabaab hadda waxa ay ku dhuumanayaan deegaanka Bodhei oo ka mid ah Keynta Booni,waxa ay yihiin kuwo gambanaya,ma awoodaan in ay Ciidamada Kenya toos uga hor yimaadaan,waxaana wadnaa hawlgal aan dooneyno in aan cabsida Al-shabaab ee dadka deegaanka la kulmaan ku ciribtirno weyna dhowdahay.”
Dadka deegaanka ayuu ka codsaday in ay laba jibaaraan qaabka ay xogta ula wadaagaan Ciidamada,marka ay arkaan Al-shabaabna ay ciidama deg deg u wargeliyaan si wax looga qabto.
Previous articleCiidamada maamulka Puntland ayaa howl galo ka wada qeybo kamid ah buuraha Galgala(Daawo Sawiro)
Next articleWasaaradda Amniga oo sheegtay inuu Muqdisho ka yaraaday hubkii cuslaa ee lagu watay(Dhageyso)